पूर्वप्रधान सेनापतिलाई आइलाग्यो आपत, सम्पत्ति छानविन गरिने ! - Media Dabali
पूर्वप्रधान सेनापतिलाई आइलाग्यो आपत, सम्पत्ति छानविन गरिने !
शुक्रवार, फाल्गुण २ २०७६
काठमाडौं– नेपाली सेनाको मुख्यालय पुनर्निर्माणका क्रममा भएको भनिएको भ्रष्टाचारमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चासो देखाएको छ।
जंगी अड्डा मुख्यालय निर्माणका क्रममा व्यापक भ्रष्टाचार भएको उजुरीपछि समितिले चासो देखाएको हो।
राज्य व्यवस्था समितिले सेनाको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न तीन सदस्यीय उजुरी सुनुवाई कार्यदल गरेको थियो। कार्यदलले आठ महिनाभन्दा बढी समय लगाएर गुनासो तथा उजुरी छानबिन गरेको आजको अन्नपूर्ण पोस्टले लेखेको छ । सत्तारुढ नेकपाका सांसदद्वय रेखा शर्मा, नवराज सिलवाल तथा प्रमुख विपक्षी दलका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू सदस्य रहेको कार्यदलले ५० वटा उजुरी छानबिन गरी बुधबार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
क्षेत्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग कार्यदल प्रतिवेदनले पूर्वप्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनको लागि पत्र पठाउन समितिलाई सुझाव दिएको छ।
पूर्वप्रधानसेनापति क्षत्रीविरुद्ध २०७६ भदौ १२ गते समितिमा उजुरी परेको थियो। कार्यदलले प्रतिवेदन समितिमा बुझाएपछि सांसदहरूले सेनाभित्र भइरहेको भ्रष्टाचारले नेपालको लोकतन्त्र खतरामा परेको बताए।
सेनाको व्यापार मोहले मुलुकलाई नै खतरामा पारिरहेको भनाइ कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहको छ।
शुक्रवार, फाल्गुण २ २०७६०२:१६:००